Sibaluleke Kangakanani Isithombe Sakho Sephrofayela Ye-LinkedIn? | Martech Zone
Eminyakeni embalwa edlule, ngahambela ingqungquthela yamazwe ngamazwe futhi babenesiteshi esizenzakalelayo lapho wawukwazi khona ukuthwebula izithombe ezimbalwa. Imiphumela ibimangalisa… ubuhlakani obungemuva kwekhamera bekwenze ukuthi ubeke ikhanda lakho endaweni eqondisiwe, ukukhanya kwalungiswa ngokuzenzakalelayo, futhi kwakhanya… izithombe zathathwa. Ngazizwa njenge-supermodel ye-dang baphume bebahle kakhulu… futhi ngawalayisha ngokushesha kuwo wonke amaphrofayili.
Kodwa kwakungenjalo ngempela mina. Angiyena i-supermodel. Ngiyindoda ejabule, ekhohlakele, futhi ejabule ethanda ukumamatheka, ukuhleka, nokufunda kwabanye. Kwadlula izinyanga ezimbalwa futhi ngangidla isidlo sakusihlwa nendodakazi yami kanye nowesifazane engangimazi wahlala ukuze axoxe nathi. Indodakazi yami… engakwazi ukuvumela noma yisiphi isimo ukuba singathwetshulwa… ithwebule isithombe sethu sihleka kancane.
Ngiyasithanda lesi sithombe. Ngangidinga ukugunda izinwele, ingemuva laliwukhuni olufudumele, ukukhanya kwamukeleka, futhi ngigqoke isikibha esingenalutho esi-burgundy.. anginasudi noma ithayi. Lesi sithombe is mina. Lapho ngifika ekhaya, ngayinqamula futhi ngayibeka phezu kwami LinkedIn iphrofayili.
Buka futhi Xhuma NoDouglas ku-LinkedIn
Yebo, angisona nje isisebenzi ku-LinkedIn. Ngiyisikhulumi, umbhali, umxhumanisi, nomnikazi webhizinisi. Akupheli iviki ngingaxhumani nomuntu engingaba uzakwethu, iklayenti, noma umsebenzi ku-LinkedIn. Angikwazi neze ukugcizelela ngokwanele ukuthi sibaluleke kangakanani isithombe sakho sephrofayela. Ngaphambi kokuba sihlangane, ngifuna ukukubona, ngibone ukumamatheka kwakho, futhi ngibuke emehlweni akho. Ngifuna ukuzizwa sengathi unobungani, uchwepheshe, futhi ungumuntu omuhle ongaxhumana naye.
Ngingakuthola lokho esithombeni? Akuwona wonke… kodwa ngingathola umbono wokuqala!
Ingabe Isithombe Se-LinkedIn Sithinta Ukuqashwa Kwakho?
Adam Grucela at I-Passport-Photo.online uphendule lo mbuzo obalulekile ngezeluleko ezithile ezivelele ezinezibalo ezisekelayo kule infographic. I-infographic ithinta izici ezithile ezibucayi zesithombe sephrofayela ye-LinkedIn... kufaka phakathi izici eziphezulu:
Charisma – yenza isivakashi sikuthande futhi sikuthembe.
bomsebenzi - lungisa isithombe sibe yi-niche yakho.
Quality - layisha kuphela izithombe ezithathwe kahle.
Ubuntu – bakwenze bakwazi kangcono.
Banikeza amathiphu - njengokuqasha umthwebuli wezithombe ochwepheshe, usebenzisa isithombe sekhwalithi ephezulu, uqinisekise ukuthi sisebenza kahle, sebenzisa ukuma okuhle futhi ubonise ukuthakazelisa kwakho. baphinde banikeze amafulegi abomvu:
Ungasebenzisi ubuso obubonakala kancane.
Ungasebenzisi isithombe esinokulungiswa okuphansi.
Ungasebenzisi isithombe seholide.
Ungasebenzisi isithombe esingelona iqiniso.
Ungasebenzisi isithombe senkampani phezu kwesomuntu siqu.
Ungabi ngaphezulu-the-top ekubeni okhululekile.
Ungasebenzisi isithombe ngaphandle kokumomotheka!
I-infographic iphinde ikwazise ukuthi isithombe sakho asiyona yonke into... ukwenza kahle yonke iphrofayela yakho ye-LinkedIn kubalulekile ekwandiseni ikhono lakho lokuxhuma nokuqashwa. Qiniseka ukuthi ufunda ezinye izindatshana zethu kanye ne-infographics ehambisana nayo, kufaka phakathi lokhu umhlahlandlela onemininingwane wokuthuthukisa iphrofayili yakho ye-LinkedIn, kanye nalezi ezengeziwe Amathiphu wephrofayela ye-LinkedIn.
Kodwa Ngiyakuzonda Ukuthatha Izithombe
Ngiyasithola kodwa isithombe sakho sephrofayela hhayi kwakho! Uma uzonda ukuthola nokusebenzisa izithombe zakho, buza umngane omuhle omethembayo. Ayikho into efana nokuthola umthwebuli wezithombe nomngane ukuthi bakukhiphe, bathathe amashothi ambalwa, bese uvumela umngane wakho omethembayo ukuthi akhethe isithombe ozosisebenzisa. Bayakwazi! Bazokwazi ukuthi yimuphi owenza umsebenzi omuhle kakhulu ekumeleleni wena.
Tags: douglas karrinfographicLinkedIni-linkedin headshotizithombe ze-linkedinisithombe esihlanganisiweiphrofayli ye-linkedinIzithombeisithombe sephrofayiliamathiphu esithombe sephrofayela